SomaliTalk.com » 2012 » March » 16
Home » Archive Maalinta March 16th, 2012
Wasiir ku xigeenka South Africa iyo Jaaliyada dalkasi oo kulmay.
Wasiir ku xigeenka wasaarada arimaha dibada South africa iyo jaaliyada Soomaalida South Africa ayaa kulan muhiim ku qaatay City Lorge ee magaalada Cape Town iyagoo kala hadlay wasiirka arimo dhowr ah isla markaana ay talooyin dhaxal gal ah ay u gudbiyeen wasaarada arimahada dibada South Africa. Wasiirka ku xigeenka wasaarada arimaha dibada South africa ayaa soo hadal qaaday xiriirka labada dowladood...
Waxaa Hotelka Naasa Hablood ee Magaalada Muqdisho lagu qabtey xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey islamrkaana Daaha looga rogayey Radio Cusub oo la magac baxay Radio Mustaqbal , waxaana Xafladii lagu furayey ka qaybgaley Xubno ka socdey Baarlamaanka Federaalka , Xukuumada , Haween , Aqoonyahano , Odoyaal, Bahda Isboortiga iyo Qaybaha kala duwan ee Warfaafinta Ugu Horeyn waxa halkaa ka hadley Agaasimha...
Halkudheg: mustaqbal, radio
Xildhibaan Caano nuug oo Xaaladiisa Caafimaad soo Wanaagsanaatay.
Xildhibaan Maxamed Cali Cumar (Caana nuug) oo aan ku booqday hoyga lagu baxnaaninayay ee ku yaala Magalaad Khartoum ayaa aad u wanaagsaneed xaaladiisa caafimaad ka dib markii in muddo ah uu saarnaa sariiir. Xildhibaanka oo kusoo dhaawacmay qarax gaarigiisa lala beegsaday xili uu marayay wado ku taala meel u dhow hoygiisi Magaalada Muqdisho ayaa ku waayay mid ka mid ah labadiisa lugood halka mida kalena...
Gudoomiyaha Qalinleyda Adduunka Mr. John Ralston Saul Oo Dalka Jabuuti Kulan Balaaran Kula Qaatey Xog-hayaga Guud Ee Wasaaradda Warfaafinta Dalka Jabuuti.
Gudoomiyaha Urur weynaha caalamka ee PEN International Mr. John Ralston Saul oo booqasho afar maalmood qaadaneysa ku jooga dalka jabuuti ayaa kulan balaaran kula qaatey xarunta urur goboleedka IGAD ee caasimada dalka Jabuuti 11/03/2012, Xog-hayaga guud ee wasaaradda warfaafinta dalka jabuuti Md. Maxamed Ibraahim Axamed, Gudoomiyaha Ururka Somali PEN Md. Aadan Xasan Aadan, Gudoomiye Sharafeedka Somali...